31 May 2013 - Twi Online
Friday Sermon: Proclaim the Bounties of Allah - USA and Canadian Tours - 31st April 2013 - Ashanti Twi Translation.
ƐFIADA NYAMESƐM: Kͻtͻnimaa Bosome da a ɛtͻ so 24, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon 24th May 2013 – Ashanti Twi Translation)
KA NYANKOPƆN ADOM NO HO NSƐM-USA NE CANADA MAN MU APRƆBƆ.
“Ka wo Nyankopͻn adom no kyerɛ afoforͻ” (93:12).
Nyankopͻn adom no bɛtumi ayɛ awiase mu neɛma, gyidie ne sunsum mu gyinabrɛ nso ka ho bi. Nyankopͻn de awiase mu adom no dom obi prɛkopɛ, wͻ baabiara. Wͻn a wͻnom wͻ gyidie na wͻhunu Nyankopͻn sɛ Ɔno ne nhyira nyinaa ti no, awiase adom no wͻnom ns aka bi. Berɛ a wͻn anigye ho na wͻsan da ase no, wͻnom san ka kyerɛ awiase sɛ, Nyankopͻn nko na nhyira nyinaa firi. Afei gyidie ne sunsum mu ahoteɛ mborosoͻ na ɛba wͻnom afa mu.
Yɛn Ahmadiyyafoͻ yɛ Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no somfoͻ, ɛno nti yɛn nsa aka saa adom wei. Ɛyɛ nhyɛ ma Ahmadiyyani biara sɛ ͻbɛka Nyankopͻn adom yi ho nsɛm. Ɛkwan baako a yɛbɛfa so ayɛ wei ne sɛ yɛbɛdi Nyankopͻn mmra no so na afei ɛkwan foforͻ ne sɛ yɛbɛka ho nsɛm akyerɛ awiase nyinaa ɛnam Tabligh so, a ɛba bɛhyɛ sunsum mu hann a yɛde adom yɛn no na ɛbɛyɛ nhyira soronko. Ɛyɛ Nyankopͻn adom a ɛda adi wͻ berɛ a Ɔboa yɛn wͻ ahokyerɛ mu na Ɔhyiraa yɛn mmͻho wͻ berɛ a y’ani nda. Wei nko twe y’adwene kͻ Ne so. Sɛ ͻgyidini mapa nya anisoadehunu wͻ saa asɛmpͻ yi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ͻbɛkͻ so anya Nyankopͻn hͻ nhyira.
Nyankopͻn soma Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no mmerɛ yi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ͻbɛhyeta Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) nsɛma no. Nyankopͻn de Ne mmoa ne Ne nsɛnkyerɛne a na ɛyɛ adansedie ma saa mmerɛ yin a ɛsomaa no. Saa adansedie ne mmoa yi yɛ bͻhyɛ soronko koraa, ɛfiri sɛ Nyankopͻn aka akyerɛ Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no sɛ, Ɔbɛboa no adom morosoͻ a ͻrentumi nwie.
Nyankopͻn yi kyerɛɛ Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no sɛ, sɛ wo kann Nyankopͻn adom no a, wo ntumi nkan (Tadhkirah, pp120-121 2009 edition). Nyi kyerɛ baako so ka sɛ, toa so ka wo Nyankopͻn adom no ho nsɛm (Tadhkirah, pp 557-558).
Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no atwerɛ sɛ, sɛ wowͻ asɛdeɛ ma mmra no “Na wo Nyankopͻn adom na, ka kyerɛ afoforͻ”. Saa ahobraseni wei nhunu mfasoͻ biara sɛ wͻnom bɛka sɛ N’adom ne Ne nhyira no. Otumfoͻ ne Ahummͻborͻni no, ama saa ahobraseni wei nsusueɛ wͻ nsɛm yi nyinaa mu. W’ansoma deɛ mfasoͻ nni soͻ yi nsapan na W’anyi no wͻ berɛ a nsɛnkyerɛne nka ho. Ɛkwan foforͻ so no, Ɔde nsɛnkyerɛne nyinaa domm no, ɛno na ɛda adi no, na ɛbɛkͻ so ada adi. Gyesɛ Nyankopͻn de nhyehyɛeɛ gu kwan mu a, Ɔbɛtoaso ada nsɛnkyerɛne yi adi (Nkyerɛaseɛ firi Tafseerul Quran Vol VI p649).
Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no asan atwerɛ sɛ, Ahobraseɛ ne tema yɛ nhyehyɛeɛ a ɛho hia ma Ubadiyyat (atuhoakyɛ ma Nyankopͻn anaasɛ wobɛyɛ N’akoa). Afei nso sɛ yɛwͻ asɛdeɛ wͻ saa kyɛfa yi mu no “Na wo Nyankopͻn adom na, ka kyerɛ afoforͻ”. Ɛho nso hia sɛ yɛbɛka no ho nsɛm (Nkyerɛaseɛ firi Tafseerul Quran Vol VI p649).
Da biara yɛn nsa ka Nyankopͻn adom ne nhyira a, yɛka nsɛmpa a kyɛfa yi hyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ no. Yɛde ahobraseɛ na ɛyɛ wei ɛsan sɛ yɛbɛpere yɛn nkoa deɛ. Hadhra Khalifatul Masih akͻ aprͻbͻ nansa yi wͻ USA ne Canada a wͻn ne ahͻhoͻ dii nhyiamu. Nyankopͻn boa maa Islam nsɛmpa no daa adi, na afei ɛhyetaa wͻ mpɛnpɛnsoͻ bi a na ɛboro deɛ Jama’at no rehwehwɛ no. Wei ne nhyira a ɛka Nyankopͻn nhyira no ho, na ɛnyɛ obiara ahoͻden. Jama’at no hyɛɛ aseɛ wͻ Atͻeɛ afa mu wͻ USA wͻ berɛ a Hadhrat Khalifatul Masih kͻͻ aprͻbͻ wͻ hͻ wͻ berɛ a na ͻnkͻͻ hͻ da. Ɔkͻͻ Los Angeles kuropͻn no mu, beaɛ ne dͻm dodoͻ a ɛwͻ hͻ ne asodie a ɛda Jama’at no so no, Huzur kaa no wͻ Fiada a ɛtwaa mu no. Ɛnɛ, Huzur kaa sɛ Jama’at no nhyɛ aseɛ nkyerɛ ahͻhoͻ.
Jama’at no siesie beaɛ soronko bi wͻ Hotel bi a ɛwͻ Los Angeles. Kandifoͻ no dwenee sɛ, sɛ wodwene awiase ho neɛma a, ebia nipa dodoͻ no nsesa wͻn adwene gyesɛ awieɛ no, na nyianoo ne adwene kyerɛ reba. Wͻde nhyehyɛeɛ guu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ebia na nipa dodoͻ a yɛato nsa afrɛ wͻn no ho bɛhann wͻn. Na wͻn a ɛbaa hͻ bie no dͻͻso ma no kͻbaa ne sɛ, ɛmaa mpanimfoͻ no adwuma kɛseɛ. Ɛwieɛ no, na ɛwͻ sɛ yɛma tenebrɛ no no dͻͻso na afei yɛpa wͻn a wͻkaa sɛ wͻde wͻn ndamfonom bɛba hͻ bi no kyɛw. Nipa akuniniahodoͻ na ɛbaa nhyiamu a Hadhrat Khalifatul Masih kasaa no.
Ɔkyerɛɛ Kuran asɛm yi ase tiawa “Awiase nyinaa Nyankopͻn deɛ”. Na ne nhwesoͻ no, ͻkasa faa ͻdͻ a na Ɔkͻmhyɛni (NNN) wͻ ma nipa adasa, san kyerɛɛ mu sɛ, saa ne subanpa yi yɛ nhwesoͻ a ɛwͻ sɛ yɛdi so. Ɛbɛyɛ dɛn na Islam ayɛ awudie som? Ahͻhoͻ no nyae nsunswansopa wͻ Ɔkͻmhyɛni (NNN) subanpa no ho. Obiara kaa sɛ, ɛwͻ sɛ yɛka saa nkyerɛkyerɛpa yi ho asɛm. Awiase no hia wei. Dͻm no bi baa Hadhrat Khalifatul Masih na ebinom daa wͻn anigyeɛ adi na ebinom nso twe kͻͻ MTA kasa fidie so.
Saa nhyiamudie kͻͻ so bosome Kͻtͻnimaa ne da a ɛtͻ so du baako. Na nkurͻfoͻ a wͻfiri beaɛ ahodoͻ kͻͻ bi. Na ahͻhoͻ dodoͻ no yɛ 291 a wͻpɛ Islam nkyerɛkyerɛ no a ɛyɛ asomdwoeɛ, ͻdͻ, obuo ne pɛpɛɛpɛyͻ wͻ awiase yi mu. Na US mpanimfoͻ akukudam anum ka ahͻhoͻ no ho, na nsɛmtwerɛfo du nan (14) si nsɛmtwerɛfoͻ no anan mu. Aban no mu mpanimfoͻ nso yɛ du nson (17), nimdeɛfoͻ akunini (Professors) nso dodoͻ yɛ aduasa nson (37) na wͻn a w’akͻ sukuu adu akyire (Diplomats) nso yɛ du miɛnsa (13) ɛna akuo nso a ɛnhyɛ aban ase (NGO), ɛsom ahodoͻ aduonu nkono (29) nso baa hͻ bi ne wͻno a wͻwͻ ahobambͻ kuo no mu nso. Deɛ adi soͻ yi yɛ ahͻhoͻ no bi adwwene kyerɛ:
Barbara Goldberg kaa sɛ: Meretwerɛ de kyerɛ m’anigyeɛ a mo too monsa frɛɛ yɛn baa mo sunsum mu kandini dwumadie a ͻdaa no adi no. Moyɛɛ nhyiadie soronko a na ɛnyɛ sɛ morekyerɛ obuo nkoa, na mmom mo daa ɛsom no kuo no daa adi a na yɛnnim ho nsɛm pii.
Ɔhͻhoͻ baako nso kaa sɛ: Mo sunsum mu kandini akyerɛ nsesaeɛ a me nnim ho nimdie pii nanso ne nyinaa akyi no, ne nsɛm no ne me som nkyerɛkyerɛ no ɛsɛ anaa ɛyɛ baako. “Yɛdͻ Obiara, Yɛn tann Obiara”, ebinom nteaseɛ. Yɛwͻ Nyame Baako na ne Nyame no yɛ me Nyme…nsɛm biara a afiri n’anum ba biara yɛ nokorɛ. Botaeɛ a ɛsi n’ani so sɛ, awiase bɛnya asomdwoeɛ ne kͻkͻbͻ a ͻbͻfa akodieɛ kͻ diewuo ne akoo ho yɛ nsɛm a ɛwͻ sɛ yɛn kandifoͻ no tie na wͻnom de yͻ adwuma.
(Mayor) aban krakye panin a ͻwͻ Redlands CA kaa sɛ: Mepɛ sɛ meda moa se wͻ berɛ a motoo monsa frɛɛ me Memeneda no na me bɛtie mo sunsum kandini nsɛm a ͻkasa faa nteaseɛ ne asomdwoe nkutahodie wͻ ewiase yi mu. M’ani agye sɛ metie mo sunsum mu kandini nsɛm a ɛkasa fa asͻre ne aman nkyekyɛ mu ho no…Ɛwͻ sɛ yɛhyɛ no nso sɛ, nkurͻfoͻ dodoͻ wͻ ewiase yi mu a yɛyɛ wͻnom nyiyimu ɛsan wͻn gyidie fa wͻnom som ho nti. Me ne mo sunsum mu kandini yɛ adwene sɛ yɛrentumi nnya asomdwoe wͻ berɛ a yɛrengyae kasa basabasa ne awudie ne atirimoͻden yɛde tia afoforͻ no. Me gyidie ne sɛ yɛn mmabunu no sua adeɛ duru akyiri a, yɛbɛtumi abue wͻn ani aba ewiase a nteaseɛ ne tema ma yɛnho wͻ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ewiase yi mu bɛyɛ nteaseɛ ne asetena pa ama yɛn. USA fa bi wͻ hͻ a, yɛka nsɛm de tia Islam na ɛfa a ɛwͻ ha yi yɛka Islam nkyerɛkyerɛ ho asɛm.
Lee Baca, ͻpanin a w’agye din a ͻyɛ Los Angeles County Sheriff kaa sɛ, Ɔkronkronni Mirza Masroor Ahmad nsrahwɛ wͻ Los Angeles no de asomdwoe nsɛm, ͻdͻ ne pɛpɛɛpɛyɛ na ama nipa (500) a wͻn gyidie yɛ soronko wͻ ɛsom ahodoͻ mu. Na bɛhwɛadefoͻ dodoͻ no yɛ ahobambͻfoͻ mpanimfoͻ, Aban no mu mpanimfoͻ, kuropͻn mu mpanimfoͻ ne nimdiefoͻ. Ɔkronkronni gyinaa “Ɔdͻ ma obiara, ͻtan ni hͻ ma obiara” so, ka ho asɛm, sɛ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no nkyerɛkyerɛpa ne ewiase asomdwoe a ɛyɛ ɛsom nyinaa asodie sɛ obiara bɛgye atomu no yɛɛ tema soronko koraa maa wͻn a na wͻnom wͻ hͻ bie no. Wei ne ͻman korͻ a wͻnom ka nsɛm bͻne fa Islam ne Ɔkͻmhyɛni (NNN) ho na afei a Islam nkyerɛkyerɛ aduru hͻ no, wͻnom ntumi nyɛ hwee na deɛ wͻnom bɛyɛ ara ne sɛ wͻbɛtie. Nyankopͻn ɛnom Muslimfoͻ nyansa a wͻnom bɛtumi de wͻn subanpa no ada Islam nkyerɛkyerɛpa adi.
Ɔnimonyamfoͻ Grey Davis a na ͻyɛ Governor wͻ California kaa sɛ: M’ani agye n’asomdwoe nsɛm, nteaseɛ ne obuo a ͻde maa Nyame mma nyinaa… Wo nim, me susu sɛ, ɛwͻ sɛ yɛhunu sɛ yɛn nyinaa yɛ Nyankopͻn mma….Nyankopͻn yɛ baako pɛ, Ɔno na Ɔbͻͻ yɛn nyinaa, na Ɔpɛ sɛ yɛ dͻ No na yɛ dͻ yɛn nuanom. Na ͻtena Huzur nkyɛn nti ͻne no dii nkutaho a ͻkyerɛɛ ne dͻ a ͻwͻ ma MTA, na ͻsan faa MTA nhyehyɛeɛ no kaa sɛ ͻbɛhwɛ MTA dabiara.
Eric Garcetti yɛ ͻtitenani ma Los Angeles Council kaa sɛ: Ɔkronkronni nsɛm no kyerɛ kwanpa a yɛbɛfa so aka yɛn ho abͻ mu sɛ anuanom ne obuo sɛ ɛyɛ fapem ama nkͻsoͻ ne asomdwoeɛ. Yɛsrɛ nkͻsoͻ ma no wͻ ne dwumadie a ͻde ka ͻdͻ, anisoadehunu ne nteaseɛ ho asɛm wͻ ewiase afaanan nyinaa.
Dana Rahrabacher, US Congressni kaa sɛ: Ɛnɛ yi Ɔkronkronni ɛkaa nsɛm a na ɛfa yɛho yie…Ne nsɛm a ɛkasa fa nteaseɛ ne ͻdͻ ne sɛ yɛbɛgye yɛn ho atomu no hia yie sɛ ɛbɛka yɛn nyinaa abͻ mu wͻ ha. Wei ne da a ɛdi kan koraa a mehunu no, na m’ani agye ne nimdeɛ ne nyansa ne nsɛm a ͻka si so dua de too dwa no ɛne nhwehwɛmu a w’ayɛ afa ewiase ho. Ɔwͻ nsɛmpa a ɛsom ahodoͻ ne gyidie ahodoͻ no bɛgye adie. N’asomdwoeɛ nsɛm no yɛ nsɛm a obiara pɛ sɛ ͻtie. Ɔwͻ nyinasoͻ wͻ berɛ a ͻka asomdwoeɛ ho nsɛm no.
Rachael Moran Ɔyɛ Dean wͻ Sukuupͻn a ɛwͻ California mmra di sukuu mu, ͻkaa sɛ: Ɛyɛ me ahohoͻhoa ne akwanya sɛ m’aba nhyiamudieɛ a ɛde nteaseɛ ne asomdwoe ba. Yɛde adesuade a ɛho hia yie paa na ɛrekͻ fie ɛnɛ. Ɛwͻ sɛ yɛn nyinaa yɛ no asodie sɛ yɛbɛhwehwɛ asomdwoeɛ na y’ato fapem wͻ y’abrabͻ mu ne akwanyasa nyinaa so. Deɛn na ɛbɛtumi ayɛ fɛ asene sei? Ɔkronkronni yi gyina hͻ ma sunsum mu nkankorͻ ne nhwɛsoͻ ɛma yɛn nsɛm a ɛho hia ma awiase a akoo ahyɛmu ma yi. Ɔbͻͻ yɛn nkaeɛ sɛ, asomdwoeɛ yɛ y’asɛdeɛ enti yɛwͻ kyɛfa a yɛbɛtumi ahyɛ Akristofoͻ nsͻre no na nkoran a ɛsi n’anisoͻ no, ne nhyehyɛeɛ a ɛfa ɛsom ho no, yɛn nyinaa wͻ ͻdͻ te yɛn mu na yɛn nyinaa wͻ asodie sɛyɛbɛdͻ yɛn ho.
Ɔnimonyamfoͻ Muhammad Samir, Egypt Council titenani kaa sɛ: Ɔyɛ ͻkandini a ͻnim nyansa san wͻ nimdeɛ. M’ani gyeɛ yie wͻ deɛ ͻkaa no ɛnɛ yi…..Ne nsɛm no nyinaa hyɛ nkuran na mereka ahyɛ afoforͻ nkuran sɛ, wͻnka mbͻmu na wͻndi dwuma. Ɛwͻ sɛ yɛde n’afotuo no nyinaa bͻ bra.
Sophia Pandya, Ɔbemfoͻ a ͻwͻ ɛsom nwoma sua mu wͻ California State University no mu kaa sɛ: M’ani gyeɛ wͻ asomdwoe nsɛm ne ͻdͻ ma nipa nyinaa a Ɔkronkronni aka no ho.Ewiase no hia wͻn a wͻnom dwene nipa ho te sɛ Ahmadiyya Kuo no.
Aziza Hasan kanee kwankyerɛfo panin ma Muslimfoͻ badwam nkutahodie, kaa sɛ: Abasobͻdeɛ kͻ ma Memeneda soronko yi. Me kͻeɛ wͻ berɛ a na me bo atͻ na m’anya ahoͻden soronko wͻ gyidie mu na m’abɛyɛ Muslim kuo no mu nipa. Na Ɔkronkronni kasa no kͻ tͻtee. M’ani gyee ho sɛ ͻkasa faa kasa basabasa a ebinom ka de tia Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no. Nipa pii pɛ sɛ wͻtwe wͻn ho firi asɛm no ho. Ne nsɛm a ͻde too dwa no kͻ maa ahͻhoͻ akukudam ne nkurͻfoͻ pii.
John McMahon firi San Berardino County a ͻyɛ Sheriff nkorabata no bi kaa sɛ: Na asɛm no gyina botaeɛ so na yɛn nyinaa gye to mu sɛ yɛka yɛn ho bͻ mu hwehwɛ asomdwoeɛ ne akwankyerɛ a, ɛwͻ sɛ yɛtu ho bata.
Dr Frank Leivo, Aduronimni, kaa sɛ: Ɔkronkronni gyina hͻ ma nsakraeɛ bi a m’anya nkutahodie wͻ ne hͻ na afei nso, ne nsɛm ne me som nhyehyɛeɛ kͻ pɛpɛɛpɛ. nsɛm a ɛfiri n’anum ba biara yɛ nokorɛ. Ne botaeɛ sɛ ͻbɛpere asomdwoe ama awiase asomdwoe ɛne ne kͻkͻbͻ fa akodeɛ ako ho no yɛ nsɛm a ɛwͻ sɛ yɛn mpanimfoͻ no tie na wͻde yɛ adwuma.
Revered Jan Chase ɛkaa sɛ: M’ani agye ho sɛ, m’abɛhyia Ɔkronkronni na m’atumi aba saa nhyiamu kɛseɛ sei yi. Me pɛ nsɛm a ɔka faa ne atuturasɛm no ho.
Dana Rohrabacher yɛ Republican Congressni a ne nsɛm kaeɛ fa Islam atuate kuo ho. Ɔkasa faa Boston topaeɛ a ɛtoo no ho sɛ, Islam hyɛ mmɔfra kutupa sɛ wɔnom ndi awu na ɛyɛ amanehun ma ɛnɛ awaise yi. Ne nsɛm a ɔkaeɛ wɔ berɛ a ɔkɔɔ Los Angeles no na yɛdi kan aka dada. Ekyire no ɔtwerɛɛ krataa kɔmaa yɛn badwam titenani (Director of Public Affairs) wɔ USA. Na ɔtwerɛɛ sɛ, ɛwɔ sɛ Ɔkronkronni nya awerɛhyɛmu sɛ n’aprɔbɔ wɔ California Anaafoo duaa aduaba pa a ɛbɛso na ɛbɛtwe akomapa wɔ mfie a ɛbɛba no. Enti wei ne nsakraeɛ a ɛba faa adwenkyerɛ wɔ Huzur aprɔbɔ no ho.
Los Angeles Times busaa Hadhrat Khalifatul Masih nsɛmpɔ bi. Deɛ ɛdi soɔ yi ne nsɛmbusa ahodoɔ ne n’ano yiie:
Asɛmbusa: Ɛkwan bɛn so na wo fa so de Islam nsɛmpa sɛ ɛyɛ asomdwoeɛ som, wɛ tebea a wohunu no wɔ US. Ɛfa awudiesɛm a Muslim atuatefoɔ no yɛ no ɛma nkurɔfoɛ nya adwene foforɔ fa Islam som ho?
Nyiano: Abakɔsɛm mu no, Muslimfoɔ atamfo no atoahyɛ asan ateetee wɔnom mmerɛ pii, na wɔnom hunu sɛ wɔreko, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtua ateetee na ɔhaw no ka. Na ɛnɛ yi, ɛsom mu ntɔkwa saa nni hɔ bio. Da biara, atuate kuo bi sɔre wɔ Islam din mu na wɔnom bɛtia Islam nkyerɛkyerɛpa no so no, ɛwɔ sɛ yɛn nso sɔre gyina na yɛ kasa tia. Nnyɛ US nko na mmom awiase mu baabiara a wohunu sɛ yɛresɛe Islam din no, ne wɔn a wɔnnte Islam som no ase no. wei ne atuate kuo, nnyɛ nokorɛ som no akyidifoɔ, enti yɛbɛsɔre atia wɔn dabiara. Ɛhanom wɔ USA yɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛma adwumapa. Wɔ mfie mienu a atwamu no, yɛyɛ dwumadie bi a wɔfrɛ no “Muslim ma nkwa” ho dawuro yɔtwe mogya maeɛ. Ɛda a adi nkan no, mogya nkɔtoe mpem du (10,000) na yɛde kɔɔ ayaresabea ahodoɔ mu.
Asɛmbusa: Mo kuo no ɛnka asɔredan ne mantamu a ɛtwe wɔn ho firi Muslim kuo no bebiree a wɔwɔ Middle East a wɔn frankaatufoɔ pɛ sɛ wɔde Islam mmra yɛ adwuma wɔ aberɛ a wɔnni Arabia nsesaeɛ. Wɔ w’adwene mu no, ɛsom yi bɛtena hɔ daa sɛ wɔ yi aban foforɔ?
Nyiano: Wɔ Egypt ɛdeɛn na yɛ hunu wɔ sɛ abrɛ a wɔtuu Husni Mubarak aban no gu yɛ no ɛnsesayɛ foforɔ biara ɛmmaa yɛ. Sɛ yɛdaso wɔ aban bi a wɔnom ɛnyɛ wɔnom adwuma yie ma ɔman mma no na wɔsan tiatia wɔnom faahodie so.wɔ Libya, abusua biara wɔ no aban. Na ɔpanin a ɔwɔ ahɔban bɔ mu bɔ wɔnom kɔkɔ sɛ wɔnom a w’ayɛ wɔnom adwene sɛ wɔbɛtu aban a wato aba ayinoo no agu, na sɛ wɔnom antu anamon bi a basabasayɔ foforɔ besi. Wɔ Tunisia, obiara ka sɛ wɔnom pɛ sɛ wɔ sesa wɔ papa mu ɛne ɛsom edin mu ɛnso asomdwie biara nni hɔ. Sɛ anka nokware mu kabi-ma-menkabi wɔ saa mantamu no a, ɛneɛ adwuma wɔ Atɔeɛ fa mu.
Asɛm bisa: Sɛn na ewiase no kɔso sɛ wɔnom bɛma asomdwie aba mmea a ɔkoo ne basabasa yɛ wɔ hɔ?
Nyiano: Bosome kakeraa bi a ɛtwaa mu no ɔmanpani a ɔwɔ isreal a wɔfrɛ no Shimon Peres ka kyerɛ ewiase nkabom kuo no sɛ wɔnom mfa asraafoɔ nkɔ mmea a basabasayɔ wɔ hɔ no na ɛnso saa asraafoɔ yi nyinaa yɛ Arabfoɔ.Ɛnyɛ atoeɛ mu asraafoɔ ɛyɛ mantamufoɔ no adwuma sɛ wɔnom bɛka abom na wɔnom ayere wɔnom ho sɛ wɔbɛ si basabasayɔ no anokwan.Ɛyɛ ɔman a w’twa Syria ho ahyia no sɛ wɔnom bɛsi ntɔkwa no ano.
Asɛm bisa: Wodwene sɛ ɛkwan bɛn na yɛ fa so a Syria ntɔkwa no to bɛtwa?
Nyiano: Syria aban no mu dodoɔ no ara yɛ Alawite abrɛko a Syriafoɔ no mu dodoɔ no ara yɛ sunnifoɔ. Aban no anhwɛ sunnifoɔ no yie na w’ansan anyɛ pɛpɛɛpɛyɔ . Seisei ɛnoɔma bibiree na ɛreba ɔman no mu,atuatefoɔ ka ho a wɔnom ɛrebɛboa atuatefoɔ no.Bɔne ne akumkum akumkum no, aban no na ɛhyeɛ aseɛ, ɛnso seisei wɔnom mmienu nyinaa afom. Wɔnom ankasa ɛntumi ɛnsiesie asɛm no ɛnti ɛwɔ sɛ wɔte kuo bi a wɔbɛtene ase na w’apɛ kwan a ɛntɔkwa no so bɛtwa.
Asɛmbusa: Wo se ɛyɛ aman a w’atwa hɔ ahyia no asɛdeɛ sɛ wɔbɛma asomdwoeɛ aba. W’ahunu deɛ nansayi Russia ne America kaaeɛ no nansayi sɛ wɔbɛka afaanu mienu yi nyinaa abɔ mu, na wɔn nkutahodie mu ɛkwan a wɔnom a w’atwa hɔ ahyia no ɛgye so, anaasɛ saa aman mienu yi a wɔwɔ tumi no ɛnni Nyamesom biara anaa?
Nyiano: Seisei awiase nyinaa ɛyɛ baako , ɛnti yɛka sɛ wɔnom a wɔbɔhyeɛ a ɛso paa yie. Ɛnso awiase no da so wɔ fapem mienu wɔ Russia a wɔnom tae Syria aban akyi ɛna Atɔeɛ aban no nso tae atuatefoɔ no akyi. Ɛbɛyɛ ama Russiafoɔ ne Americafoɔ no sɛ wɔnom bɛgyae basabasayɔ no wɔ hɔ. Ɛwɔ sɛ ɛso twa ɛfiri sɛ, sɛ ɛkɔ so a ɛbɛtwe awiase nyinaa akɔhyɛ mu na abɛyɔ awiase nyinaa ɛko.
Asɛmbusa: Ahmadiyyafoɔ no panin paa no afiri Pakistan. Ɛdeɛn bɛn na ɛwɔ mu a ɛda mo ne Muslimfoɔ nkaeɛ no ntamu, na ɛnsunswansoɔ bɛn na ɛwɔ Islam nsɛmka no so?
Nyiano: Yɛ gyidi sɛ Mɛsia no aba abɛyɛ ntɔsoɔ. Ɔkɔmhyɛni a w’anfa mmra amma, a ɛyɛ deɛ wɔde Ahmadiyya kuo no baeɛ wɔ afe 1889 mu. Na ɛnso afoforɔ a w’aka no gyidi sɛ, sɛ Ɔkɔmhyɛni Kronkron (NNN) no aba no nkoara deɛ, ɔkɔmhyɛni foforɔ biara mma, sɛ ɔde mmra foforɔ bɛba anaasɛ ɔmmfa mmra biara ɛmma.
Wɔ Pakistan no, wɔnom ahyɛ mmra atia Ahmadiyyafoɔ, wɔnom ka sɛ yɛnnyɛ Muslimfoɔ wɔ mmra ne ahyɛdeɛ nso Ahmadiyyafoɔ a wɔwɔ hɔ no boro ɔpepei. Nyɛ Pakistan nko na wobɛtumi ahunu sɛ ɛyɛ suro a ɛwɔ Mullahfoɔ no so sɛ, sɛ wɔnom ansi Ahmadiyyafoɔ kwan amfiri ho sɛ wɔbɛsom wɔn som a, Ahmadiyyafoɔ no bɛtwe muslimfoɔ a wɔwɔ Pakistan no nyinaa abɛka wɔnom ho.
Asɛmbusa: Ewiase nyinaa ɛhenefa na Ahmadiyya mu yɛ den na wɔn ɛsan trɛ ɛntɛm so?
Nyiano: Yɛwɔ akyidifoɔ a wɔboro ɔpepei wɔ Asia, na ɛnso wɔ Ebibiman Atɔeɛ no yɛredɔɔso paa wɔ hɔ. Na Pakistan yɛ beaɛ a Ahmadiyyafoɔ dɔɔso wɔ hɔ paa yie na ɛnso nansayi Ebibiman no mu bi dɔɔso paa yie. Yɛredɔɔso da biara, afe biara nipa bɛboro mpem ɔha(100,000) na ɛbɛka ho.
Ɛbinom suro Islam, ebinom so hunu ɛsom biara saa. Wɔnom ngye Nyame nni, ɛnso wɔnom bɛsan aba wɔn akyi abɛgye ɛsom bi ato mu. Sɛ wɔnom ɛsan ba a, yɛ gyeidi na yɛ san wɔ awerɛ hyemu sɛ yɛ bɛ boa wɔnom ama wɔn asisi honhom mu kwan a wɔagya ato hɔ no nyinaa wɔ nkyerɛkyerɛ a adi mu wɔ ɛsom mu.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ, aberɛ biara no, wɔntwerɛ pii wɔ anobaabae mu. Ɛnso Los Angeles Times bɔɔ wɔnom ho mmɔden twerɛɛ anobaabae no. Huzur ka kyerɛɛ anaamusini no sɛ, sɛ wɔnom angye Ahmadiyya anto mu a, wɔn nkyirimma bɛgye ato mu. Insha Allah deɛ ɛtoaso no bɛyɛ na Ahmadiyya bɛhyɛ honhom mu kwan no a ɛda hɔ no ma.
Hadhrat Khalifatul Masih ɛsan bɛtotoo n’ano a ne anaamusini no firi Wall Street Jornal, koowaa nkrataa a nkurɔfoɔ ɛtaa kann. Wɔnom anaamusifoɔ no busaa Huzur sɛ ɛdeɛn nti na ɔbaa California? Huzur yii wɔn ano sɛ, awiase nyinaa yɛ yɛn dea na ɛwɔ sɛ yɛde yɛn nsɛm no kɔ baabiara. Wei akyi no, ɔbaa hɔ sɛ ɔrebɛsera ne Jama’at mma no. Na saa asɛmbusa yi nyinasoɔ ne sɛ amanyɔfoɔ no bi ba nsrahwɛ wɔ USA bɛpɛ awiase agyapadeɛ. Huzur kaa sɛ, w’amma hɔ sɛ ɔrebɛpɛ biibi ama ne ho anaa ne Jama’at no. Ɔkaa sɛ, adeɛ baak pɛ a mehwehwɛ afiri USA foɔ hɔ ne sɛ, sɛ wɔnom bɛyɛ nhyehyɛeɛ na wɔnom bɛma asomdwieɛ atu mpɔn wɔ ewiase. Ɔsan so bɔɔ wɔn kɔkɔ ɛfa ewiase ko ho na ɛho bɛhia sɛ wɔnom bɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛma wɔnom a wɔnka ɛko ho a wɔrehwere wɔn kra no ɛso atwa.
Wɔ nsrahwɛ no mu no, ɛnam Los Angeles Times, Wall Street Journal, Chicago Tribune ɛne kowa nkrataa ahodoɔ a akano maa nsɛm no duru nipa ɔpepei num ne akyire pɔ ahanum (5.5million) na ewiase abɛɛfo ntentan so no, ɛduru nipa ɔpepei num, na radio so no ɛduru nipa bɛyɛ ɔpepei baako ne akyire pɔ ahanum. Weinom nyinaa ntumi ɛmma wɔ yɛn ankasa yɛn ahoɔden so, gyesɛ ɛnam Onyankopɔn nkoara so. Na ɛkyerɛ ne Kɛseyɔ. Ɛwɔ sɛ Jama’at no nya mfasoɔ firi wei sɛo.
Na ɔsan toa so kɔɔ Vancouver, Canada babi a Baitur Rahman asɔredan no wɔ a ɔkɔbue asɔredan no ano. Wɔtoo wɔnsa frɛɛ ahohoɔ na dwumadie yɛɛ krabɛhwɛ. Ne nyinaa no, wɔ Canada no y’asɛm no duru nipa 8.5million wɔ aberɛ a na yɛrebue asɔredan no ano, na ɛnam anobaabae a wɔbaabae Huzur ano no. CBC ne BBC ne nkaeɛ de too dwa maa nipa bɛyɛ ɔpepei baako na ɛhwɛeɛ. Na nipa bɛyɛ ɔpepei mienu na ɛhwɛɛ no wɔ CTV so, wɔ beaɛ a wɔkenkan kowa krataa no nipa bɛyɛ mpem ahaensia na ɛhwɛeɛ. Nkoowaa nkrataa a wɔn dodoɔ yɛ edu na ɛfaeɛ. Na radio station so no nipa bɛyɛ ahaensia na ɛtieɛ.
Manmeeth Singh yɛ Jama’at adamfo dada. Ɔyɛ anaamusini wɔ beaɛ a wɔfrɛ hɔ Alberta. Ɔkaa sɛ, w’atwerɛ krataa bi a ɛfa asomdwoeɛ ho a ɔrekɔka wɔ Geneva. Aberɛ a ɔtie Huzur kasa no, ɔbɛsesa nsɛm no bi wͻ ne nsɛm no mu na ͻde Huzur deɛ no bi ahyɛ mu. Anaamusini ma “radio station” bi a wͻfrɛ no Sher e Punjab se, wͻhunuu nsɛm no wͻ akokoduro so. Na nipa foforͻ a wͻkaa Huzur nkaseɛ no ho asɛm no wͻ aberɛ a wͻrebue asͻredan no ano. Yɛ kenkan ade foforͻ a ɛkasa fa faahodie a ɛwͻ ɛsom mu. CBC anaamusini kaa sɛ, Hadhrat Khalifatul Masih ɛyi asɛmbusa no nyinaa ano sɛdeɛ na wͻsi hwehwɛ no. Adwumayɛni bi kaa sɛ, w’ahunu sɛ ɛnyɛ Kristianfoͻ nkoara na ɛkasa fa asomdwoe ho wͻ aberɛ a na ͻrebue asͻredan no ano. Ɔkaa sɛ wͻbɛka wei akyerɛ ne mma. Muslimni bi a ͻfiri Morocco ɛkaa sɛ, wͻnom sɛ saa asɛm yi a ɛfa asomdwoe ho no bɛyi adwene mu naa a ɛfa Islam ho no sɛ ɛyɛ atuatefoͻ som no. Ɔkaa sɛ ͻyɛ Muslimni na ɛnso w’asua ade foforͻ bebiree afiri Huzur nkasaeɛ no mu. Ɔhͻhoͻ baako nso kaa sɛ, asɛm no fa noͻma bɛbiree ho. Asɛm no tͻfamu ne sɛ na ɛkasa fa ɛsuro a yɛsuro nipa bi a ɛno nti asɛm no yɛ asɛm a adi mu. Ɔhͻhoͻ baako nso kaa sɛ, na asɛm a ɛfa Nyankopͻn Koroyͻ no ho no hia ma ewiase nyinaa.
Na afoforͻ nso bͻͻ wͻnho mmͻden paa yie. ɛduru nipa ͻha nkyekyɛmu ɛnan wͻ USA, na ͻha nkyekyɛmu aduonum wͻ West Coast, na wͻ Canada nso no ɛduru nipa bɛyɛ ͻha nkyekyɛmu aduonum. Wei nyinaa yɛ Nyankopͻn adom nti. Wͻbusaa asɛm bi wͻ Canada sɛ, Muslimfoͻ a wͻwͻ asaase yi so da saa asomdwoeɛ yi adi anaa? Huzur yii ano sɛ, Kur’aan no nkyerɛkyerɛ yɛ asomdwoe ɛnso akandifoͻ no ne nipa no ɛnni so, ɛda wͻn ankasa ɛso. Muslimfoͻ no ɛnni nkyerɛkyerɛ no so, nti na Nyankopͻn somaa Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no. Aberɛ biara no yɛka asɛm yi ho biribi, Keteke bi ho asɛm a ɛsii wͻ Canada, topaeɛ atoto atotoͻ ne London ekum no. huzur kaa sɛ weinom nyinaa siieɛ ɛfiri sɛ nipa atwe ne ho afiri Nyankopͻn ho, na ɛnnyɛ Islam nkyerɛkyerɛ. Nnipa kakeraa bi na ɛyͻ wei yͻ wei wͻ Islam din mu. Na wͻsan bͻͻ Muslim kuo a wͻwͻ Britian aba so sɛ wͻnom ani san Woolwich wuo no a Muslim kuo no ka sɛ ɛnyɛ Islam nkyerɛkyerɛ.
Wͻbusaa Huzur sɛ, ɛdeɛn na yɛreyͻ ama atuatesɛm no so atwa wͻ awiase? Huzur kaa sɛ yɛyere yɛho sɛ yɛbɛtrɛ asomdwoe wͻ awiase nyinaa, yɛntumi mma asomdwoe nkͻ baabiara ɛnso yɛreyɛ deɛ yɛbɛtumi sɛ yɛbɛtrɛ Islam nkyerɛkyerɛ no akͻ baabiara na yɛbɛkͻ so ayɛ saara. ͻreyi asɛmbusa wͻ asͻredan mu a ɛfa atuatefoͻ ho no, Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ, yɛn asͻredan mu no yɛkasa fa asomdwoe ne ͻdͻ ho ɛno nti na wͻnom a wͻwͻ adwene bͻne dodoͻ ɛnni yɛn kuo no mu. Ɛwͻ afoforͻ mu no, Anaamusini no kͻͻ so busaa Huzur sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wͻ bɛ nya Huzur ama no aka sɛ Islam ɛmmoa asomdwoe. Huzur ɛka kyerɛɛ no sɛ, deɛ wͻbɛyɛ biara no n’asɛm no ɛnsesa. Ɛyɛ kakera no ͻno ankasa ka kyerɛɛ Ahmadiyyafoͻ no sɛ ɛno ne deɛ na ͻsi n’aniso. Ampa ara sɛ, Islam nkyerɛkyerɛ no bɛba mu.
CBC anaamusifoͻno busaa sɛ, ɛkwan bɛn so na y’asɛm no bɛduru ewiase nyinaa. Ɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛbɛyere yɛho de asɛm no aduru ewiase nyiaa. Na aberɛ bi wͻ hͻ a na ɛyɛ Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no nkoara. Na aberɛ a na ͻte ase no na ͻwͻ akyidifoͻ bɛyɛ 500,000. Na seisei, mfie 125 akyiri no, yɛ dodoͻ boro ͻpepei du Insha Allah. Muslimfoͻ ne wͻnom a wͻnnyɛ Muslimfoͻ no ɛrebɛyɛ Ahamdiyyafoͻ.
Wͻ Nyankopͻn adom mu no, nnipa bɛyɛ ͻpepei aduonu (20million) na yɛde Ahmadiyya asɛm no kͻmaa wͻn wͻ North America. Sɛ yɛbɛtrɛ Islam asɛm no dodoͻ wei so ne ne papa mu. Nnipa dwumadie ɛntumi ɛntaei yɛn akyi. Wei nyinaa firi Awurade hͻ. Efiada kakeraa bi a atwamu no, Huzur kasa faa daeɛ bi Hadhrat Khalifatul Masih IV so faa Los Angeles na ͻkaa sɛ, w’ahunu nsuo kɛseɛ a ɛtesɛ nipa. Ampa ara sɛ wͻ daeɛ no mu no, ͻtee ɛne bi sɛ ɛreba firi asaase no ase ɛreba a na ɛretae Islam Ahmadiyyat akyi. Ampa ara sɛ, ɛne no a ɛtae akyire no ɛkasa faa ho na saa akwantuo yi nso fa wei ho. Adwene kyerɛ a y’aya no bɛkͻ so akͻ soro na saa na ɛbɛkͻ so ataa Islam akyi.
Hadhrat Khalifatul Masih ɛse, w’anya tema anwanwasoͻ bi afiri Onyankopͻn ho. Bosome baako akyi a ͻkͻͻ Spain na yɛdaa Jama’at no adi. Ɔman na ɛhyɛ Islam ase no seisei abɛyɛ Kristofoͻ na seisei y’asan ada no adi wͻ hͻ. Na bosome baako akyi a ͻkͻͻ USA beaɛ a wͻn a wͻka Spanish ne Portuguese kasa bebiree ɛteɛ. Seisei ɛyɛ yɛ adwuma sɛ yɛbɛhwɛ wei so ne nsɛm a yɛde kͻͻ Spain Apueɛ ne wͻnom a wͻwͻ Atͻeɛ na saa nkurͻfoͻ wei no nyinaa bɛba Islam frankaa no ase. Sɛ yɛdii nkan kaaeɛ wͻ Efiada Nyamesɛm firi Los Angeles no, Spainfoͻ ne Portuguesefoͻ no kaa sɛ wͻnom dͻͻso kyɛn wͻnom a wͻte Spain no mprɛn du. Ɛnti ɛwͻ sɛ yɛhwɛ wͻnom yie.
Hadhra Musleh Maud (ra) kaa sɛ, nkutahodie bi wͻ USA ne “Owia a ɛhyeren firi Apueɛ” no ntamu. Ɛnti yɛnyɛ nkyerɛkyerɛ soronko wͻ USA na afei yɛnkyerɛ wͻnom adeɛ ne afoforͻ no nso adeɛ. Yɛnyɛ wei wͻ aseda mu na ɛnda adi wͻ yɛn suban mu. Saa ara na Canada baabi anya yɛn nsɛm no. Na Jama’at a wͻwͻ Canada no nso nyɛ Tabligh ɛne Tarbiyyat a wͻnom de bɛba Onyankopͻn ase na ɛbɛma wͻnom aduru mpɛmpɛnsoͻ a ɛwͻ soro wͻ Nyamesom mu Insha Allah. Nyankopͻn ɛmoa Jama’at wei mienu nyinaa ne ewiase nyinaa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛbɛnya yɛn anisoadehunu wͻ kwan pa so.
Hadhra Khalifatul Masih kaa sɛ, wͻ USA ne Canada no, Onyankopͻn aboa ɛnketoa a wͻwͻ mu no ɛne y’adwuma wͻ ͻkwan soronko so. Saa nkyirimma wei ɛnyere wͻnho na wͻnyɛ adwumaden na wͻnyɛ wͻn asɛdeɛ yie. Atwerɛtwerɛfoͻ ma ͻman mienu no nyinaa yɛ mmabunu. Wͻnom ate ho nso ayɛ adwuma yie paa. Na seisei no ɛyɛ Tabligh ne Tarbiyyatfoͻ no adwuma sɛ, wͻnom bɛnya mfasoͻ afiri beaɛ foforͻ no. Onyankopͻn ɛnhyira wͻnom na Ɔnto wͻnom ahobraseɛ mu. Ɛnni kwan sɛ yɛyɛ ahomasoͻ wͻ wei mu, na ɛmom ɛwͻ sɛ wͻ yɛ ahobraseɛ ɛfiri sɛ ɛno na ɛho hia paa. Onyankopͻn ɛmoa yɛn nyinaa na yɛni so. Amen!